SkySafari neNoLocation, maviri maapplication makuru ari kutengeswa chete izvozvi | IPhone nhau
Tinoenderera mberi IPhone nhau kutsvaga nekukuratidza zvimwe, zvimwe zvezvakanakisa kupihwa uye kukwidziridzwa kunowanikwa muApp Store. Uye nhasi, pakati chaipo pevhiki, iwe unofunga maitiro makuru maviri.
Kana uchinetseka kuti mukuru wako anogona kuziva kwawakatora mufananidzo uyo izvo iwe zvawakagovana paTwitter, kana kana iwe uchida kuziva uye uchida ziva zvakavanzika zvedenga, saka unofanira kukurumidza nekuti mafomu maviri ari kupihwa nhasi ano achangova enguva yakatarwa. Ipapo usaende kunonyunyuta saka mhanyira ivo ipso facto.
Ruzhinji rwedu rwese rwunonetsekana nezve kwedu zvakavanzika zvisinei, kana isu tikatora mifananidzo uye tichigovana navo pasocial media, isu tinogovana, pamwe tisingazive, nzvimbo iyo pikicha yakatorwa, sezvo iri ruzivo ruchichengetwa pane metadata yemifananidzo.
Seizvo zita rayo rinoratidza, «NoLocation» iko kunyorera kwaungagone bvisa ruzivo rwekugara mumifananidzo yako nenzira yakapusa. Kana ruzivo urwu rwabviswa, iyo menyu yekugovana ichavhura otomatiki kuti iwe ugone kuivhura paTwitter, Facebook kana chero kwaunoda, asi pasina kuburitsa pachena kuti mufananidzo uyu wakatorwa kupi.
NoLocation ine mutengo wenguva dzose we3,49 euros, zvisinei ikozvino, kana iwe uchimhanyisa, unogona kuchengetedza hupenyu hwako zvakati wandei zvakavanzika zvemahara.
Kunyangwe iwe uri fan of nyeredzi, kana kana usati wambomira kufunga zvisati zvaitika pane zvinopfuura izvo maziso ako anoona kana uchitarisa mudenga, SkySafari 5 Icho chikumbiro icho, ndine chokwadi, uchachida.
Inoenderana ne iPhone ne iPad, inopa ruzivo pamusoro penyeredzi dzinopfuura zana nemakumi maviri, nyeredzi, mapuraneti, satellites uye nezvimwe zvakawanda. Iwe unogona kusangana chero Eclipse, yapfuura kana yemberi, dzidza zvese nezveInternational Space Station, gamuchira zviziviso kana ichipfuura nepamusoro pemusoro wako, ziva ma satellites ekugadzira akakomberedza Nyika nezvimwe zvakawanda. Ingotora yako iPhone, nongedzera kumatenga, uye SkySafari 5 ichakuwanira iwe zvese zvakavanzwa mudenga. Ehezve, panguva ino iyo app inongowanikwa muChirungu.
SkySafari 5 ine mutengo wenguva dzose we € 3,49 asi ikozvino unogona kuitora chete € 1,09 kwenguva pfupi. Nenzira, iyo Mac vhezheni iri zvakare kutengeswa pahafu yemutengo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » SkySafari uye NoLocation, maviri maapplication makuru ari kutengeswa chete izvozvi
Philips Hue inogadziridza nekuwedzera dimmer switch uye inofamba maseru